Umhla My Pet » Yintoni Ngokwenene Women Want?
ngokuthi david Shade
ukubuyekezwa: Apr. 06 2020 | 5 min ukufunda
Ukuba ubuza mfazi oko ufuna, uya kuphendula ngokuzama ukuchaza ukuba ufuna umntu yena. Yaye ngokuqhelekileyo kunzima echaza ukuba. Akakwazi nokude ukuchaza ukuba yintoni na ekufuneka ngokwenene.
Xa ngenyameko abafazi kulwalamano, ufumanisa ukuba abanye budlelwane esanelisa kunye nempumelelo ngaphezu kwabanye. Kuba ubudlelwane yimpumelelo, umfazi kukufumana zonke izinto udinga. Kulwalamano ukuba bayazazizalisekisa, omnye okanye ngaphezulu kwiimfuno yomfazi akalandelwa wadibana.
Uyayazi Xa Into ebaluleke kakhulu Engekhoyo
Xa ngenyameko nabafazi waphuma phandle umtshato wabo, ufumanise ukuba kokufumana ezo ekuphosayo emtshatweni wabo. Umzekelo, ukuba besini uyadika, uya kufumana nomthandi umdla. Ukuba ngesondo ngo umtshato wamkelekile, kodwa yena uvakalelwa kukuba zingasatyelwa kuphathwa ngentlonipho, uya kufumana umntu oya imphathe ngentlonelo. Xa abafazi aye ngaphandle komtshato wabo, bafuna ukuba omnye okanye ngaphezulu kwiimfuno zabo wadibana. Abanye abafazi, ukuba kuthatha amadoda amabini ezahlukeneyo ukuze ufumane zonke iimfuno zakhe wadibana, ukuba Uyakuyenza loo nto.
umdla, kwiimeko ezininzi, abafazi akazange afune ukuya ngaphandle komtshato wabo. Babesazi nje ukuba ungonwabanga. Baba zizisulu kukuhambela kwamanye amadoda koko bakhetha ukuya nayo.
Kuba uninzi lwabasetyhini, ukuba ngaba bekungayi zonke iimfuno zakhe wadibana, uza kuyishiya emntwini ngokupheleleyo kwaye ukhangele indoda abangonelisa yakhe. Kodwa akazi ukuba kungenxa yokuba abazali bakhe ukuba zonke iimfuno zakhe wadibana, iyayazi kuphela izinto ngolwalamano nangakuthandiyo yena.
Abafazi bendingazi, kwaye uninzi lwazo ngokuqinisekileyo nga zichazi ukuba, kodwa abafazi kufuneka izinto ezine ukuze kuzaliseke.
Kukho izinto ezine Kubalulekile Ibhinqa Needs
Ekuqaleni, ukuba kufuneka bazive kuthakazelelwa ngenxa umntu eyodwa ukuba yena. Udinga ukuba azive, Ngokungafaniyo nawuphi omnye umfazi. Kwaye udinga ukwazi ukuba indoda yakhe ixhasa yakhe kwinzame zakhe.
Isibini, ukuba kufuneka bazive uxhulumaniso lweemvakalelo olunzulu olusondeleyo. Udinga ukuba ukuba ukwabelana ngokweemvakalelo nomntu wakhe. Yinto uxhulumaniso uba kuphela naye.
Isithathu, ukuba kufuneka bazive ngathi ngumfazi. Udinga ukuba azive entle, sexy, zobufazi. Udinga ukuba nandipha zonke ezo zinto bokuba umfazi.
yaye ekugqibeleni, udinga ngesondo eshushu ndiyazingca. Udinga ukuba ilukuhlwe, yomkamntu, ndisenokugezelwa, yaye anelisekile, ngapha nangaphaya kwakhona. Udinga ukuba izinto ezintsha, ngeendlela ezintsha, kuquka neminqweno neendima. Oku kwenza azive ubomi.
lizaliseke Umfazi ngoyena xa ukunye nomntu enayo yonke kunye, xa ukunye nomntu naye afa iyabetha malunga. Kodwa ukuba kwenzeka kunqabile. Ngesiqhelo, omnye okanye ngaphezulu izinto zilahlekile.
Imizekelo yabantu ezahlukahlukeneyo Life lomfazi
Makhe sijonge amadoda ezahlukeneyo ukuba umfazi nobesoloko ebomini bakhe. Amadoda badibana ezinye iimfuno, kodwa hayi zonke.
I Boy Bad
Umzekelo, makhe uthabathe zonke odumileyo inkwenkwe embi classic. Inkwenkwe embi unika ngesondo lakhe umdla. Kwaye ngenxa yokuba ngendoda kakhulu, wenza azive sexy. Kodwa yena self komore wendele izigebenga phezu kwakhe. Yena a nga kha kuthakazelelwa, yaye mhlawumbi akakwazi ukuziva naluphi uxhulumaniso ngokweemvakalelo. Udla abe likhoboka kuye kuba ngesondo intle kangaka yaye yena uvakalelwa njalo ngesondo kakhulu. Yena uya kuzama ndabulaleka okumdambisa, kodwa naziqhamo. Xa nahlukene ngokweemvakalelo, ekugqibeleni yena emke ngokulungileyo. Ubuncinane ekugqibeleni self eliphezulu ukuzithemba umfazi amagqabi ngokulungileyo.
Ngoko kukho mfana classic wimp intle. Wenza azive ezixabisa, kwaye unako ukuseka uxhulumaniso ngokweemvakalelo naye. Ngelishwa nangona, nguye uyadika, okanye kungathethwanga zobudoda, ngoko yena uvakalelwa sexy kwaye azive kuvulwaqalwa ngesondo. Ndimbuza umthande ukutshata naye, ngokuba Ndingathanda ungafezeka intsapho, kodwa ngenxa yesizathu esithile uqhubeka abakhawulezi yokuthethathethana. Oku kuba ayenzi azive njengesidalwa ngokwesondo.
Eli Guy chu OlungekhoyoName
Ekufutshane ukuze ukuya ubudlelwane efanelekileyo ijoni ayifumaneki ngokweemvakalelo. Nguye na wimp, kwaye akukho nje komore. Ukuze abe isiduna ukunika ngesondo wakhe olungileyo. Abe linene ndimenze azive kuthakazelelwa kakhulu. Kodwa ikho nenye into ebalulekileyo ezingekhoyo. Nguye ayifumaneki ngokweemvakalelo. Yena akazange uziva ezidityanisiweyo ngokwasemoyeni kuye. Oku mhlawumbi yeyona inkulu isikhalazo abasetyhini. Yafumana mfo efanelekileyo ngandlela zonke, kodwa yeyhi, nguye ayifumaneki ngokweemvakalelo. Ezama phezu naphezu ukufumana ukuba ndityhile kuye, kodwa loo nto ayizange yenzeke. Abasetyhini zizidalwa ngokweemvakalelo, kwaye kufuneka oko, ngoko ke ekugqibeleni amagqabi.
Kukho abanye abantu ebomini bakhe. Kukho umhlobo wakhe gay. Uyakuthanda ejinga naye kuba umenza azive sexy kwaye ngokwenene yenza azive kuthakazelelwa. Yena kakhulu abafana naye, kodwa yeyhi, nguye gay, kwaye oku kungenza ingakwaizi ukhetho.
Kwaye ke kukho negugu athile engummangaliso. Ngenxa yezizathu ezininzi ndimbuza asoze mqondeni nzulu nantoni, kodwa damn, besini kulungile. Kanye qho emva kweenyanga ezimbalwa, xa athe ke kukudika ukuba izinto zihamba ngenxa yakhe, uza naye izakubiza kwaye ndiwele into enye, kwaye enye kuphela. Kuba besini. Kwaye ngoko Usuka enethemba kungekudala uza kufumana umntu ofanelekileyo.
yaye ekugqibeleni, njengoko omnye umzekelo wokugqibela, kukho indoda etshatileyo. Kuphela low self esteem abafazi kuvumela ukuba ube yinkosikazi, okanye ngamanye amazwi, umfazi ofuna oko akanakuba. Yena unika ngesondo lakhe umdla, wenza azive sexy, zinophawu uxhulumaniso enzulu ngokweemvakalelo. Kodwa akuyi kuwushiya umfazi wakhe. Ngoko uvakalelwa ekhethekileyo. Kwaye ngenxa yokuba self esteem phantsi, kunzima kakhulu kuye ukushiya.
Kodwa masenze kubuyela self eliphezulu ukuzithemba abafazi.
Ukuba nje wayenakho Zonke nokuba ufuna
Ngoko ke, nabo imizekelo amadoda asebomini bakhe. Njengokuba ubona, omnye okanye ngaphezulu iimfuno zayo ezingekafikelelwa kwi umzekelo ngamnye. Kodwa cinga ukuba ukuhlangana umntu ngokulula wadibana zonke iimfuno zakhe. Umntu owenza yaneliseke kuthakazelelwa. Indoda babephethwe uqhagamshelo enamandla enzulu ngokweemvakalelo naye. Umntu owenza azive ukuba yeyentombazana aze ngentlangano kwaye sexy. Umntu onika ngesondo lakhe ashushu ndiyazingca. Ngoku oko kuya kuba kuhle.
Oko ke uMyili Umthandi. Nguye womelele kodwa nokuthantamisa. Ukunyaniseka kodwa ngobuchule. Oliduna kodwa ngokweemvakalelo. Isigqibo kodwa bhetyebhetye. EJolise ukanti okhawulezileyo. Iqhutywa ukanti ngokunika. Someleleyo kodwa banyameke. Kwaye unika zasendle ukungxola orgasms zayo.
Ntombikayise uhlobo nto abafazi baphupha.
Ibe ingqalelo uphando lwam ngenxa wokugqibela 15 kwiminyaka, kwaye sele Kumqulu encwadini yam, “Obalaseleyo Lover Manual uDavide Shade yakhe.” Ungafunda okuninzi malunga ncwadi kwiwebhusayithi yam.
Ndinike abafazi uyolo eningenakukholwa,